NgoMvulo, nge-10 kaDisemba ngo-2012 Douglas Karr
Abanye abantu abakwishishini lamaphephandaba bangathanda ukuba ubalilele. Ngelixa ndisalithanda ivumba le-newsprint kwaye ndithanda ubuntatheli bobuchwephesha, ishishini lelinye endinombulelo ngalo lonke ixesha ngokufumana i-boot kuyo. Andizukuqhubeka kwakhona malunga nayo… iiposti zam zangaphambili Apha, Apha, Apha kwaye Apha intle kakhulu ukuyigubungela!
Nangona kunjalo ngenkqubela phambili engenakuphikiswa yexesha kunye nokudaleka kwetekhnoloji, ishishini lamaphephandaba elalisakuba lelona libalaseleyo kubonakala ngathi linikezele kwinto yonke, i-intanethi. Ngokufikelelwa kwayo kwihlabathi liphela, ukufumaneka lula nokuthandwa phakathi kolutsha oluchubekileyo lobuchwephesha, ishishini lamaphephandaba liye lehla kakhulu ekuhanjisweni nakwinkcitho yentengiso, oko kubuza umbuzo ocacileyo othi: “Ngaba likho ikamva lamaphephandaba?” Ukusuka kwi-infographic: Ukuhla kwephepha
tags: Ukuhanjiswa kwephephandabainfographic yephephandabaPhe phandaba
Ngaba kufuneka uthengise ngamagama aphambili ngaphandle kweVolumu yokuKhangela?